रेखा थापाको जन्मदिन, अनुमान गर्नुस् कति वर्ष पुगिन् ? « Ramailo छ
रेखा थापाको जन्मदिन, अनुमान गर्नुस् कति वर्ष पुगिन् ?
नेपाली फिल्म क्षेत्रकी सर्वाधिक चर्चित र सफल नायिका रेखा थापाको भदौ ५ गते जन्मदिन हो । रेखालाई जन्मदिनको शुभकामना ।
करिब दुई सय फिल्महरुमा अभिनय गरेकी रेखालाई थुप्रैले सामाजिक सञ्जालमा जन्मदिनको शुभकामना दिइरहेका छन् । सेलिव्रेटी, सञ्चारकर्मीदेखि सर्वसाधरण सम्मले रेखालाई ह्याप्पी वर्थ डे टु यु लेखेर फेसबुकमा पोस्ट गरिरहेका छन् । करिश्मा मानन्धर, दिपाश्री निरौला, पूजा शर्मा लगायतले रेखालाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । सबैको शुभेच्छाबाट दंग भएकी रेखा एसोेएस बाल बच्चासँग जन्मदिन मनाउँदै छिन् । उनी यतिबेला तिहारमा रिलिज हुने फिल्म मालिका प्रचार प्रसारमा व्यस्त छिन् ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा झण्डै दुई दशक बिताएकी रेखा थापा आफै चाहि कति वर्षकी भइन् होला त ? ‘वर्ष त आउँछ जान्छ । मन र मस्तिष्क पो जवान हुनु पर्यो त ?’ उनले ठट्यौली शैलीमा भनिन् । आफ्नो उमेर भन्न नचाहेपनि रेखा थापा २०७५ साल भदौ ५ गतेबाट ३५ वर्षमा प्रवेश गरेकी छन् । रेखा र दीपासँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :